အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်: အင်းလေးရိုးရာ ချည်ထည်များ
21 Responses to “အင်းလေးရိုးရာ ချည်ထည်များ”
ရောင်စုံ ရှမ်း အင်္ကျီ တွေ ထမိန်တွေ တော် တော် လှ တယ်..ဒီဇိုင်း လည်း စုံ တော့ တော် တော် လေး ကြည့် ကောင်းတယ်.. ။ ရှမ်း မလေး တွေ ၀တ် ရင် ပို ကြည့် ကောင်း တယ်။
အင်း ထဲက ဆိုင် ရှင် တွေ က အမှတ် တရ ဆိုင် ဖွင့် ပြီး ကမ္ဘာ လှည့် ခရီး သွား တွေ ဆီ ဒေါ် လာ ရ ကြ တာ။
ဓါတ်ပုံ တွေ ကောင်း တာ အထူး ပြော စရာ မလိုတော့ ဘူး။ ရိုက် လည်း ရိုက် နိုင်တယ်။ ကြည့် တဲ့ လူ တနေ့ တမျိုး မရိုး ရ ဘူး။
အား ပေး လျှက် ပါ။
လှတယ်နော်အစ်မ.. ။ အင်းလေးကို လွမ်းတယ်.။ တောင်ကြီးကိုလည်းလွမ်းတယ်. ။ တစ်ချိန်တုန်းကတောင်ကြီးသူကိုလည်း ( ပေါက်စ မသိအောင် တိတ်တိတ်လေး) ရုတ်တရတ်သတိရတယ်.။
Thanks for the photos. I love all the clothing. It makes me want to go back.
အစ်မ အင်းလေးရောက်တုန်းကလည်း အဲလိုပဲ။ ချည်လုံချည်လေးတွေ သဘောကျလိုက်တာလေ။
ဟိုဟာလည်း ၀ယ်ချင် ဒီဟာလည်း ၀ယ်ချင်နဲ့....။ နောက်ဆုံးတော့ ၅ထည်လောက်နဲ့ သံယောဇဉ် မနည်းဖြတ်ခဲ့ရတယ်း))) အနီဝမ်းဆက်လေးနဲ့ မော်ဒယ်ကလည်း ချစ်စရာလေးး)
မျက်စိရှော့ပင်းလုပ်သွားတယ်.. မချောရေ..း))... ဒီအတွက် လက်ဆောင်ကောဝယ်လာလား.. :P
ချည်ထည်ဆို ပင်နီပဲ ထင်ထားတာ။ အရောင်စုံ၊ ဒီဇိုင်းစုံပဲဗျ..။ လှမှလှ...။ အင်းလေးကို ရောက်ဖူးချင်သွားပြီ။
ဒီပို့လေးကို ကြည့်ရင်း တော်တော်လွမ်းမိသား
ဘလော့ဂ်ဂါပီပီ ဓါတ်ပုံတွေ ရိုက်လည်းရိုက်နိုင်တယ်.. အစ်မ စိတ်ရှည်လက်ရှည် ရိုက်ခဲ့လို့လဲ ညီမတို့တွေ ငမ်းရတာ.. :D ဓါတ်ပုံရိုက်လိုက်.. ချည်ထည်ရွေးလိုက်နဲ့ မချောတစ်ယောက် ဘယ်လောက်တောင် အလုပ်ရှုပ်သွားမလဲနော်.. :)
အမဲရောင်လေးလှတယ်။ ချောနဲ့ တော့အကုန်လိုက်ပါတယ်။
ချည်ထည်တွေ ဝင်ငေးသွားတယ်ချောရေ။ ချည်ထည်ဆို ကြိုက်လွန်းလို့လေ။ ဒီဘက်ကလူတွေကို မှာရတာ ခဏခဏပဲ။ ဈေးကြီးလို့ မှာ,မရဘူး။ ဆိုင်တွေမှာလည်း သိပ်မတွေ့ဘူးလေ။ ခု ချောကျေးဇူးနဲ့ ချည်ထည်တွေကို အလွမ်းပြေ ငမ်းသွားတယ်။ ချည်ထည်တွေက ခုလိုရာသီနဲ့ရော တခြားရာသီအတွက်ပါ ထိန်းညှိပေးတဲ့ အဝတ်အစားလေ။ သိပ်ကောင်းတာ။ ငေးခွင့်ရအောင် တင်ပေးထားလို့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျို့
အင်း... အင်းလေးကိုသွားလည်အုံးမှ..း)
ညီမ သွားမိရင်တော့ ပါသမျှကုန်မှား)
ဒီဖက် နှစ်ပိုင်းတွေမှာ အင်းထဲက ချည်ထည်ဆိုင်တွေ တော်တော့်ကို ခေတ်မီလာတာ တွေ့ရတယ်၊ ဒီဇိုင်း၊ အရောင်၊ ပိတ်စ အဖက်ဖက်ကနေ တိုးတက်လာတယ်၊ ချည်ထည်ဆိုရင် အဲဒီ ရွှေဟင်္သာနဲ့ ရွှေခြင်္သေ့ နှစ်ဆိုင်က နာမည်ကြီး ပါတယ်၊ အခုကော ဒီလိုပဲလားတော့ မသိဘူး၊ အင်းပေါခုံ မနန်းမြဦး ဆိုင်က ပိုးထည်တွေ ဖက်ကော.. မချော ရောက်ခဲ့သေးလား?
2004 ကနောက်ဆုံရောက်ဖြစ်တယ် အင်းလေးကို အင်းပေါ့ခုန်က အဖွားရဲ့ရွာလေ
အနီလေး..အနက်လေး..အစိမ်းလေး.. ခရမ်းလေး အားလုံးလှမှလှ...။
ဒီပို့စ်လေးနဲ့ ပုံလေးတွေကြည့်ပြီး ဘာမဆိုင် ညာမဆိုင် ငယ်ငယ်က ရောင်စုံပြီလား ဆော့တာ သွားသတိရတယ်။ အရောင်ကိုစုံလို့ ...း)))
လှလိုက်တာ မချောရေ..မဝယ်ဘဲ နေမှာ မဟုတ်ဘူး..သေချာတယ်...